ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ? | လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home » အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် » ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ?
ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ?	မင်းထက်အောင် – ၂၁ ရာစုအစ မြန်မာ့သမိုင်းလောကမှာ ပျူသမိုင်းဖေါ်ထုတ်လိုသူ လက်သစ် ဗမာ့သမိုင်းဆရာအချို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တွေခုဆိုဘွားကနဲ ပေါ်လာပါပြီ။ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော်စာတမ်းဖတ်ပွဲဆိုတာပါပဲ။ လက်ရှိမြန်မာပြည်မြေပုံထဲ အစောဆုံးရောက်ရှိသူတွေဟာ ပျူလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး အဆိုပါပျူတို့သည် ယနေ့ဗမာလူမျိုးများဖြစ်နေကြောင်း ခိုင်မာတဲ့သုတေသနပြုချက်တွေဆိုပြီး ဖြီးဖြန်းရမ်းတုတ် သမိုင်းအချက်အလက်တွေကို နောင်လာများအမွေဆက်ခံရန်အလို့ငှာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တိုင်းရင်းသားများကန့်ကွက် ခတ္တာနန် – လာမည့်နိုဝင်ဘာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပမည့် ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တိုင်းရင်းသားများက ယမန်နေ့တွင်ကန့်ကွက်စာ ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။ ယင်းကန့်ကွက်စာကို...
ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲ ပိတ်ပေးမည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းပြော မင်းသုတ – မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ပြည်နယ်ခန်းမတွင် ယမန်နေ့ကျင်းပခဲ့သော တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲပိတ်ပေးမည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက...
သုဝဏ္ဏဘူမိသည် သထုံဒေသဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပပြီးစီး မင်းသုတ – ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာများကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သုဝဏ္ဏဘူမိသည် လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်၊ သထုံဒေသဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၄...
သုဝဏ္ဏဘူမိ စာတမ်းဖတ်ပွဲယနေ့စတင်ကျင်းပ လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်က ကြီးမှူး၍ ရွှေအဆင်းဝင်းသောသုဝဏ္ဏဘူမိ ပထမအကြိမ်စာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ပြည်နယ်ခန်းမဆောင်၌...
ပျူလူမျိုးနှင့်ယနေ့မြန်မာ နိုင်မောင်တိုး(B.A; Dip.Lib;R.L) – “ပျူစစ်လျှင်မြန်မာ” ရေးသားချက်များဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေရေးခဲ့သည်ကို မဖေါ်ပြလိုတော့ပါ။ အထက်ပါ သမိုင်းအမြင်ယူဆ ရေးသားချက်ပတ်သက်၍...
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ ကွယ်လွန်ခြင်း စာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ...
သုတေသနမပြည့်စုံသည့် ပျူစာတမ်းဖတ်ပွဲကိစ္စ လွှတ်တော်သို့မေးမြန်း မင်းသုတ – သမိုင်းသုတေသနအထောက်အထားပြည့်စုံမှုမရှိသော ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူနိုင်ငံတော်စာတမ်းဖတ်ပွဲသည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး မပြိုကွဲရေးအချက်ကို ထိပါးစေနိုင်သောကြောင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို တားဆီးသင့်မသင့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်...
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ ကွယ်လွန်ခြင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ဂျုရီချိုင်း – ရှေးဟောင်းမွန်သုတေသီ သမိုင်းပညာရှင် ကွယ်လွန်သူဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှအား ရည်စူး၍စာတမ်းဖတ်ပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ မွန်ဓမ္မာရုံ၌...
နိုင်ငံတော် ရှေ့နေချုပ် ဘာလုပ်နေတာလဲ (အမှတ်-၁) စောထွန်းအေး – နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်အားလုံးပါဝင် သော ခုံရုံးသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်စား ပြည်ထောင်စု...
မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းသည့်သတင်းမဟုတ်မမှန်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်များပြော မင်းသုတ – လွန်ခဲ့သည်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော မွန်သမိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်သတင်း မဟုတ်မမှန်ကြောင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှု...
2 Responses to ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် စာတမ်းဖတ်ပွဲ ဘာလဲ?ဘယ်လဲ?	ကိုဖြူ November 30, 2012 at 12:57 am	ဒေါက်တာ ချစ်စံဝင်းဆိုတာ ဘယ်လို သမိုင်းပညာရှင်လည်း သိပါရစေ။ ပြဿနာက ဗမာက သူတယောက်တည်း မရပ်ရဲလို့ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကို အကုန်မျိုချင်နေတာပါ။ အခုဗိုက်ပေါက်တော့မယ်လေ။
ကိုဖြူ November 30, 2012 at 1:01 am	ဗမာစာဟာ မွန်စာကနေယူထားတယ်ဆိုတာကို ဆောင်းပါးတစောင်နဲ့ ရှင်းပြပေးပါလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။